Mashandiro anoita Google Lens pa Android ▷ ➡️ Android Pop ▷ ➡️
Mashandiro eGoogle Lens anoshanda paApple
Mashandiro eGoogle Lens anoshanda paApple, pakati pe "anotonhorera" maapps, pasa iyo term, Google Lens zvirokwazvo inonakidzwa nekudada kwenzvimbo pakati peavo vari muMountain View nekupfuura. Akazvarwa muna2017, pakati pebasa idzva uye neimwe, yave imwe yeiyo hazvidziviriki pane yanhasi Smartphone, Anwendung inova sevhisi uye kutaura kweizvo zvinowanzonzi huchenjeri hwekunyepedzera.
Mashandiro eGoogle maLens pane Android, chii icho?
Google Lens chikumbiro chinotibvumidza kuti tizive zvatino fomata nekamera ye Smartphone. Inowanikwa kwete chete muchimiro chekushandisa, asi isu tinoiwanawo mu Google Mubatsiri, Google Mifananidzo kana, sekureva kwevagadziri, zvakare mu smartphone kamera app.
Chaizvoizvo uyu ndiye mugari wenhaka kune yekare Google Goggles, iyo, nekuda kwehungwaru hwekunyepedzera, PC chiratidzo, muchina kudzidza uye neRuzivo Girafu, ndeyeinokwanisa kuona nekuziva zvinhu, kuongorora uye kushandura zvinyorwa, tsvaga pawebhu zvigadzirwa zvatino femba. Mune maonero anogoneka ekutenga uye ita zvakawanda.
La interface iri nyore kwazvo uye yakapusa kudaidza kukwidza kunyangwe kubva kune mamwe matavi ako. Semuenzaniso mu Google Photos pane chiratidzo chayo chinoonekwa kana uchivhura mufananidzo mubharu yepasi, mu Google Assistant mucherechedzo iwoyo uri kuruboshwe kwebhatani remaikorofoni, nepo iri muapp yekamera zvinoenderana nekuti vagadziri vamwe chete vanoisa kupi. Ipfupi. Zvisinei, uchinzwisisa kuti chii, zvazvinoita uye kupi kuti uwane, inguva yekuona mashandisiro ayo.
Mashandisiro ekushandisa Google Lens
Kana iko kunyorera kuvhurwa, kana kuburikidza nedzimwe nzira pfupi dzatinokuudza, Google Lens Iyo inoratidzwa ine akati wandei sarudzo sarudzo inoratidza izvo zvatingaite. Kopa chinyorwa, chishandure, tsvaga chinhu chekutenga, kosi yekuongorora ndiwo ekutanga mashandiro atinogona kugadzirisa ruzivo. Kuti iyo app iite zvese uye nekugadzirisa sarudzo pane imwe nguva inotevera, unofanirwa kufunga nezve otomatiki maitiro.
Ngatitangei nezvinokosha. With Google Lens tinogona, semuenzaniso, kupa zita kune izvo zvatiinazvo pamberi pedu. Ku fema chiumbwasemuenzaniso, iyo sisitimu inoziva kuti chii uye, kana ikakundikana, inotiratidza nzvimbo yainowanikwa kana chimwe chinhu chakakodzera. MuCapitol, Lens yaisagona kuziva chifananidzo chaNeptune, kana mutasvi webhiza waMarcus Aurelius, asi zvirinani akaziva kwavari.
Kutsika pasi ine ruzivo rwekuwedzera nemimwe mhedzisiro, mifananidzo yakafanana, sarudzo dzekutsvaga uye govana, uye chishandiso chekucheka mufananidzo uye kubatsira Google Lens kujekesa chinhu chakakanganiswa, izvo zvakakosha kuti system ishande zvakanaka, nenzira.
Ngatitorei pikicha yatotorwa, semuenzaniso, kuitora kubva kuGoogle Mifananidzo, pamwe pikicha yemufananidzo wakakurumbira senge Kudya kwaCaravaggio kuEmausi. Pano muchiitiko ichi Google Lens hainyadzise tarisiro ichizivisa zvakadzama, zvakafanana kuSan Girolamo penitente naTiziano Vecelio, pendi yakaoma, pasina kupokana.
Kana ari mhuka, Google Lens inokutendera kuti uzive mhando nemhando, senge pachiitiko chekutanga umo iye anokwanisa kuziva kuti idhongi reAmiata, huwandu hwembongoro dzakatsvukisa nemvere dzembudzi kana kukambaira pamakumbo nemuchinjikwa unokatyamadza, semuenzaniso.
Asi Google Lens inobatsirawo kuziva chikafu, tsvaga ruzivo nezve maresitorendi uye utenge. Pane sarudzo dzakasarudzika pane menyu uye chingorongedza ndiro yeiyo Big G app kuyedza kuziva nekupa rumwe ruzivo nezvazvo (hazviwanzo gadzirisa, sezvinoonekwa, asi tichaona zvimwe zvakanaka munguva pfupi) Padivi re kutenga, Lens inogona kumisikidza chimwe chinhu uye nekukashuma ichiti chii, mutengo pawebhu, zvinyorwa zvakafanana, nezvimwe.
Google Lens kuziva mavara
Kunyanya kunakidza kune zvazvino uye zvenguva yemberi kugona kuri sei Google Lens inoziva zvinyorwa. Parizvino, ayo makuru mabhenefiti maviri: kuteedzera basa uye kududzira. Kana chiri chekutanga chinhu, zvinokwana kurongedza peji uye sarudza nzvimbo yaunoda kuteedzera kuti uiwane mundangariro yakagadzirira kunama. Neimwe nzira, pane zvekare sarudzo yekutanga kutsvaga chii yakasimbiswa kana kuishandura kuburikidza neGoogle Dudziro.
Nekusarudza panzvimbo yeiyo basa rekushandura, Google LensPamusoro pekutibvumidza kutevedzera zvinyorwa zvakagadzirwa, zvinopa mukana wekududzira zvese. Mune ino kesi iwe unofanirwa kumisikidza peji rebhuku, posita kana chero chii, uye mirira mashoma masekondi kuti Google Dudziro inogona kududzira uye kushandura iyo yakagadzirirwa.
Zvakaoma zvinouya kana paine mitauro miviri pamwechete.
Google Lens Dhawunorodha uye Zvinowirirana Midziyo
Izvi ndizvo chaizvo zvinhu zvaunogona kuita nazvo Google Lens. Google Chinyorwa-kune-Kutaura (TTS) kuti uverenge zvinyorwa zvinonzwika kana kuzvishandura kana iyo «Pfungwa dzemaitiro» dzehembe ndedzimwe dzezvinhu zvitsva zvinogara muUnited States uye izvo zvishoma nezvishoma tichaona kubva kwatiri, nekukurumidza seimwe nzira uye Google ichaita kuti zviitike.
ari mikana yekushandisa Google Lens yakawanda kwazvouye kunyanya kunze kwenyika kana panzendoKupiwa iyo nguva, kuve nechombo chakadai paruoko kunogona kudaro inobatsira chaizvo kuti uone zvakatikomberedza uye nzwisisa zvirinani mitauro uye mazwi asina kujairika, uchienda. Nyore isina kuenzaniswa. Kana usati wakambozviedza, tambisa maminetsi mashoma nekuti zvakakosha.
Kune rumwe rutivi, Google Lens inoenderana nechero Android Smartphone 6.0 Marshmallow kana gare gare, kunyangwe iine Google Chrome. Uye kurodha pasi iyo app, unogona kuitsvaga paGoogle Play Store.
TalkBack Android Ndeipi uye ndeyei?
Mashandiro anoita Google Recorder pane Android Smartphones